Nanjary Mariky Ny Rafi-pahasalamana Tsy Mahomby Ilay Lehilahy Mahantra Indiana Milanja Ny Vadiny Maty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2016 7:15 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, ଓଡ଼ିଆ , русский, English
Tamin'ny 24 Aogositra 2016, nitondra ny vadiny marary antsoina hoe Amanga Dei Manjhi tany amin'ny hopitalim-panjakana ao amin'ny distrikan'i Kalahandi ao amin'ny fanjakana Indiana Odisha i Daana Majhi 48 taona. Nararin'ny raboka izy ary namoy ny ainy tamin'ny misasakalina.
Tsy ela taorian'izany, voalaza fa nangataka tamin'i Daana ny hopitaly mba hitondra ny vadiny, saingy tsy nomena fiara fitondrana maty maimaim-poana hitaterana ny vatana mangatsiaka mankany an-tranony izy. Niangavy ny tompon'andraikitry ny hopitaly izy mba hanao fandaminana momba ny fiara ho azy, saingy tsy nisy olona mba nanampy azy. Tsy ampy ny vola teny am-pelatanan'ity mpamboly mahantra ity mba ahafahana manofa fiara, ka nanapa-kevitra hilanja ny vatana mangatsiaka eny an-tsorony hamonjy ny tanàna handoroana ny faty izy. Nilaza ny hopitaly avy eo fa nandeha niaraka tamin'ny vatana mangatsiakan'ny vadiny tsy nanao fampandrenesana.
Niaraka tamin'ny zanany vavy 12 taona, nofonosin'i Daana sombin-damba ny vatana mangatsiakan'ny vadiny ary nandeha an-tongotra nandritra ny 10 kilaometatra mankany an-tranony izy ireo. Rehefa niha-nanatona ny mangiran-dratsy, nahatsikaritra azy mitondra ny vadiny eo an-tsorony ny olona; amin'izany mbola 50 km no misy ny tranony any Melaghara. Mpanao gazety amin'ny fahitalavitra ao an-toerana Ajit Singh nandrakitra lahatsary misy azy ireo izay nozarain'ireo olona maro tao India avy eo; rehefa avy nitady fanampiana tetsy sy teroa, nifandamina tamin'ny fakàna fiara mpitondra marary ny olona eo an-toerana ary nahavita nanangona fanomezana sasantsasany ho amin'ny fikarakarana ny faty.
Tsy i Daana ihany no olona niatrika tsy fikarakarana tahaka izany avy amin'ny toeram-pitsaboana ara-panjakana. Tamin'ny Zoma 2 Septambra 2016, tao amin'ny distrikan'i Malkangiri ao Odisha, lehilahy iray no tsy maintsy nandeha an-tongotra 6 km milanja ny vatana mangatsiakan'ny zanany vavy fito taona, satria voalaza fa nilaozan'ny fiara mpitondra marary nitatitra azy ireo teny antsasa-dalana izy ireo. Rehefa nahita ny mpiasan'ny fiara mpitondra marary fa namoy ny ainy teny an-dalana hamonjy hopitaly ilay ankizivavy, dia nangataka tamin'ny ray aman-dreniny izy ireo mba hiala ny fiara ary hitondra ny zanaka vavin'izy ireo. Napetraka tao amin'ny tobin'ny polisy Malkangiri ny Tati-baovao Voalohany (First Information Report) (FIR) hitoriana ilay mpamily, sy ilay mpiasan'ny farmasia sy mpanampy iray izay tao anatin'ilay fiara mpitondra marary.
Ny Komitin'ny Zon'Olombelona Odisha dia eo am-panaovana fanadihadiana mikasika ny zava-nitranga izay voalaza fa nanapaka faty teo amin'ny valahana ireo mpiasan'ny hopitaly ao amin'ny distrikan'i Balasore amin'izay afaka hoentin'ny fianakaviana ao anaty fonosana ny faty. Fatin'i Taramani Barik, vehivavy maty vady 85 taona izay voahosin'ny fiaran-dalamby mpitatitra entana izany vatana mangatsiaka izany. Taorian'ny loza, tsy nisy ny fiara mpitondra marary ary tsy nisy olona afaka nanofàna fiara ihany koa mba hitondra ny vatana mangatsiaka atao fandidiam-paty 30 km miala ny distrika foiben'ny hopitaly.
Mampiseho ny tsy fanjariana eo amin'ny tolotra ara-pahasalamana ao amin'ny faritra ireo tranga ireo. Amin'ireo fanjakana miisa 19 ao India, laharana manakaiky ny farany ambany amin'ny Tondro Fandrosoan'ny Olombelona i Odisha. Raha nanoratra tao amin'ny Medium, nanamarika i Siddhartha Sharma fa manana rafitra roa ny fanjakana Odisha mba hiatrehana ny olana tahaka izany. Misy ny Harishchandra Sahayata Yojana (fanampiana ny mahantra sy ny fadiranovana hanaovana ny fombafomba farany), izay manome fanampiana ara-bola ho an'ireo tsy afaka manatontosa ny fombafomba farany ho an'ireo fianakaviany nodimandry – fandaharanasa izay mikarakara ny fandoroana ny fatin'ireo tsy nalain'ny havany ihany koa. Ankoatra izany, eo ambanin'ny Rafitra Mahaparayana faha-37, novatsiana fiara 40 sy mpiasa eo amin'ny 100 eo ny hopitalim-panjakana mba hanampy amin'ny fitaterana ny faty. Nanontany i Siddhartha:
Aparajita Mishra, ao amin'ny Being Indian, nanontany koa hoe:
Farany, TS Sudhir nanoratra tao amin'ny Huffington Post:
Am-pahatsorana, raha acche Din [fotoana tsara, teny fanevan’ ny antokon'ny fitondrana] ireny, tsara kokoa ny fiainan'i India tamin'ny vanim-potoanan'ny aizina. Amim-pahatsorana Andriamatoa Praiminisitra, afaka miandry i Balochistan, andeha isika hamaha ny olan'ny Kalahandis [olona ao amin'ny distrikan'i Kalahandi Odisha] aloha.